Kunzima kakhulu ukuvula iakhawunti engaselwandle e-Emirates
Kuyafana neeakhawunti zebhanki kwi-European Union, iiakhawunti ezingaselunxwemeni e-Emirates, nangona zinenani elingenasiphelo leenzuzo kunye nezibonelelo, zibonwe njengezona zinzima ukuvula, enyanisweni phantse ayinakwenzeka. Ngoba? Olu lawulo lude nonxweme lukhetha abathengi bayo ngononophelo, kwaye enye yezona mfuno zibalulekileyo kukuba umnini kufuneka abe ngumhlali ngaphakathi kwi-Emirates, ngokuqinisekileyo ezonakalisa izicwangciso zebhanki ezingaphesheya kolwandle zabantu abaninzi kunye neenkampani.
Nangona kunzima ukuvula i-akhawunti elunxwemeni ngaphakathi Emirates Ngokwakho, zininzi iindlela, iinkonzo kunye neendlela onokuzisebenzisa ukwenza le nkqubo inzima kakhulu, kwaye enyanisweni baya kukugcinela ixesha elininzi kunye nemali.
Ungayivula njani i-akhawunti esecaleni e-Emirates ukuba andinguye umhlali?
Njengoko besesitshilo, enye yezona mfuno zibalulekileyo zisekwe ziibhanki ukuvula iakhawunti kukuba umenzi-sicelo unendawo yokuhlala kwaye uhlala kweli lizwe ukuqala inkqubo yokuvula. Las iiakhawunti ezingaselunxwemeni e-Emirates Ziyinkonzo enzima ukuyifumana, kwaye ukuba uyakwenza oko, uya kufumana imigaqo eyahlukeneyo, izihluzi kunye nemiqobo.
Eyona ndlela ilula, ethe ngqo neyona ikhawulezayo yokuvula i-akhawunti eselunxwemeni e-Emirates kukwenza oko ngeenkonzo zezemali ezinje ngeeFoster Swiss. Inkampani enikezela iinkonzo zokuvula kwaye inobudlelwane obuhle neebhanki kwihlabathi liphela, uqinisekile ukuba uya kuba nakho ukuvula i-akhawunti engaselwandle e-Emirates. Kwaye yintoni ebaluleke nangakumbi: ungayenza ukude, okuvumela ukuba ugcine ixesha elininzi kunye nemali ukufumana indawo yokuhlala kunye nokuthenga ikhaya kwelinye ilizwe.
Kusemthethweni na ukuvula iakhawunti kwi-Emirates nge-Foster Swiss?
Kwi-Foster Swiss sigxile ekubonakaleni, ezisemthethweni kunye neenkqubo ezifanelekileyo zomsebenzi. Sineegqwetha kunye neefiduciaries eziqeqeshelwe ukwenza ezona zigqibo zilungileyo ngokulandela iiparameter zomthetho, Le yeyona ndlela apho kunokwenzeka ukuba kuvulwe iiakhawunti ezingaphesheya kolwandle e-Emirates ngokusemthethweni.
Ukuvula iakhawunti engaselunxwemeni e-Emirates, konke ekufuneka ukwenzile kukubonelela ngeNgcali yaseSwitzerland ngamaxwebhu kunye namaphepha afunwa yibhanki, kwaye ukusuka apho baya kuba noxanduva lokuqalisa nokulawula inkqubo. Ukuvula iakhawunti engaselunxwemeni e-Emirates kuhlala kuthatha ngaphezulu kwenyanga ukusukela kunikezelwa amaxwebhu., kodwa yonke into iya kwahluka ngokuxhomekeka kubukho beebhanki nendlela abaqhuba ngayo inkqubo.
Ngolwazi oluthe xaxe xa kuvulwa iakhawunti engaselunxwemeni e-Emirates, unokunxibelelana nathi ngokunqakraza LAPHA.